Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo kulan wadatashi ah la yeelatay aqoonyahanada+Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Daahir Aadan / November 18, 2019 November 18, 2019
Muqdisho.(SONNA):- Waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday shir wadatashi ah oo u dhaxeeya Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS iyo qaar kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, kulanka oo socon doona muddo labo cisho ah ayaa waxay aqoonyahanadu aragtidooda ka dhiiban doonaan qodobada dib-u-eegista lagu sameeyay ee dastuurka.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Maxamed Abuukar Zubeyr oo ugu horeyn shirka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalaaysha waxa uuna sharaxay ujeeddada iyo hannaanka shirku u socon doono.
Sidoo kale, Maxamed Gaagaab oo kamid ah xubin ka tirsan Gudigga La-socodka ee dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa soo dhaweeyay shirka isaga oo ka warbixiyay howlihii badnaa ee la soo qabtay muddadii labada sano ahayd ee la soo dhaafay.
Wasiir Ku-Xigeenka Dastuurka Dr. Xuseen Cabdi Cilmi oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa sheegay in aqoonyahanada shirka lagu casumay ay hortaallo howlo adag oo ah inay aragtiyadooda ka dhiibtaan arrimaha dalka ee masiiriga ah.
Wasiirka Arrimaha Dastuurka Mudane Saalax Axmed Jaamac oo shirka furay ayaa yiri “waxaan ku faraxsanahay inaan shirkan idin kala soo qaybgalo oo ka doodno aayaha dambe ee Soomaaliya, sida aad ogtihiin dastuurka inta ugu badan dib-u-eegis ayaa lagu sameeyay waxaana dooneynaa inaad taladiina ka dhiibataan; aqoonyahanada waxay kamid yihiin dadka ugu muhiimsan bulshada sidaa awgeed waxaan idinkaga fadhinaa inaad aqoontiina ku kordhisaan howlaha aan wadno”.
Ugu dambayn, aqoonyahanada ka qaybgalaysa shirka ayaa waxaa lala waadagay nuqul kamid ah qodobada dastuurka ee dib-u-eegista lagu sameeyay iyagoo bilaabay inay ka talo bixiyaan.
Wasiirka Dhalinyarada & cayaaraha XFS oo lacag gaarsiisay gabar Soomaaliyeed ka qeybgashay tartanka Golf-ka caruurta oo Mareykanka ka dhacay
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo kormeeray xaruamaha ay ka socdaan Imtixaanaadka fasalka 8-aad+Sawirro
Madaxweyne Farmaajo oo ka Tacsiyadeeyay Geerida Marxuum Xasan Abshir Faarax
Guddoomiye Mursal oo Ka Tacsiyadeeyey Geerida Ra’iisulwasaarihii Hore Xassan Abshir Faarax
Saraakiil Ciidan Iyo Maamulka Gobolka Shabelelaha Dhexe Oo Kormeeray Fariisimo Ciidan+Sawirro
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ka tacsiyeeyay geerida Xasan Abshir
Wasiir Beyle oo Bankiga horumarinta Islaamka kala hadlay saamaynta dhaqaale ee cudurka Covid-19